२३२७० पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ भाद्र २४ , १०:३६ बजे
महेन्द्रनगर, २४ भदौ । विचौलिया प्रकृतिका तत्वले निर्मला हत्याकाण्ड सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गुमराहमा पार्न खोजे पनि राज्यका अंगहरु भने यस प्रकरणमा गम्भीर देखिएका छन् । नेपाल प्रहरी र उच्चस्तरीय छानविन समिति निर्मला हत्याकाण्डमा गम्भीर देखिएका हुँदा हत्यारा पक्राउ पर्ने संकेतसँगै प्रमाण मेटाउन खोज्ने सबै प्रहरीमाथि कारबाही हुने लक्षण देखिएको छ ।
शुक्रबार उच्चस्तरीय छानविन समित स्थलगत कार्य सकेर काठमाडौं फर्किएको छ । काठमाडौं फर्कनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको प्रारम्भिक ठहर सार्वजनिक गरेको छ । शव पाइएको स्थलको सुरक्षामा लापरवाही गरिएको समितिका संयोजक तथा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीले बताए । उनले समितिले घटनाका सबै पक्षसँग सोधपुछ गरिएको बताए पनि छानविन जारी रहेकाले थप तथ्य बताउन नमिल्ने बताए ।
७ र ८ भदौमा अवस्था नभए पनि गोली चलाइएको सहसचिव मैनालीले बताए । उनले चलाउने आदेशविनै गोली चलाइएको खुलासा पनि गरे ।
‘कञ्चनपुरको जनता त्यसै आन्दोलनमा उत्रेको होइन रहेछ,’ मैनालीले भने, ‘हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरवाही देखिएकै हुनाले एसपी विष्टलाई निलम्बन गरिएको हो ।’ प्रधान कार्यालय तानिएका एसपी विष्टसहितका प्रहरी अधिकृत तथा सीआइबी टोलीसँग काठमाडौंमा सोधपुछ गरी भदौ २६–२७ गतेसम्म गृहमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए । मैनालीले निर्मलाको वास्तविक हत्यारा पत्ता लाग्नेमा ढुक्क रहन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
शुक्रबार नै महेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्मला हत्याकाण्डले नेपाल प्रहरीलाई समेत लज्जित बनाएको बताउँदै वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन र अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने सबै प्रहरीकर्मीलाई कारबाही गर्न आफू दृढ रहेको बताए । उनले कञ्चनपुरको तत्कालिन प्रहरी नेतृत्वलाई निकम्मा र चरित्रहिनको आरोप लगाउँदै संगठनकै प्रतिष्ठासँग खेलबाड भएको बताए । उनले भने, ‘सिंगो संगठनको इज्जत दाउमा लागेको बेला केही नालायकहरुलाई बचाउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।’ आफूले पीडित पक्षदेखि सरोकारवाला सबैसँग भेटेको र हत्याकाण्डबारे प्रष्ट भएको हुँदा हत्यारा र गैरजिम्मेवार प्रहरीकर्मी उम्कन नसक्ने दावी गरे ।
हत्यारा पहिचानमा प्रगति
उच्चस्तरीय छानविन समिति र प्रहरी स्रोतका अनुसार निर्मलाको वास्तविक हत्यारा पहिचानको दिशामा महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त भएका छन् । ढिलो गरी स्थानीय वासिन्दाले केही महत्वपूर्ण सुराक दिएकोले ती सुराकमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई छ । १० साउनमा निर्मलालाई आशंका गरिएको हत्याराले मोडल बनाइदिने भन्दै बोलाएको जानकारी दिंदै स्थानीय केही महिलाले प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई लिखित रुपमैं आफूले पाएका जानकारी दिएको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार आशंका गरिएको हत्यारा समूहमा थियो । उसले त्यसअघि निर्मलालाई लुगा किनेर दिएको पनि महानिरीक्षक खनाललाई दिइएको लिखित जानकारीमा उल्लेख भएको स्रोतको कथन छ ।
स्रोतले महानिरीक्षक खनाललाई दिइएको लिखित जानकारीमा आशंका गरिएको हत्याराले निर्मलासँगै १० साउनमा अर्की एक किशोरीलाई पनि भेट्न बोलाएको तर कारणवश अर्की किशोरी जान नपाएको उल्लेख भएको बताइएको छ । लिखित जानकारीमा आशंका गरिएको हत्याराको नाम नै किटान गरिएको बताइएको छ । सो लिखितको प्रतिलिपी प्राप्त हुन नसकेकाले दैनिक मानसखण्ड ती नाम प्रकाशित गर्न असमर्थ छ ।
स्थानीय महिलाले महानिरीक्षक खनाललाई दिएको लिखित जानकारीमा बम दिदीबहिनीलाई मूख्य सूत्राधार औल्याइएको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ । महानिरीक्षक खनाललाई लिखित जानकारी बुझाउन पुगेका महिलाहरुले १० साउन मध्यरातमा बम परिवारको घरमा हल्लाखल्ला सुनिएको मौखिक जानकारी पनि दिएका छन् । उनीहरुले त्यसै रात बम परिवारको घरनजिक एउटा घरमा भैंसी ब्याएको र भैंसी कुरेर बसेका महिलाले घटनाबारे धेरै थाहा पाएको पनि महानिरीक्षक खनाललाई बताएका स्रोतको भनाई छ ।
स्थानीय महिलाले महानिरीक्षक खनाललाई लिखित रुपमैं दिएको जानकारी उच्चस्तरीय समितिलाई मौखिक रुपमा दिएका छन् । त्यो जानकारीमाथि अनुसन्धान चलिरहेकोले आशंका गरिएका व्यक्तिहरुलाई हिरासतमा नलिइएको प्रहरी स्रोतको भनाई छ । महानिरीक्षक खनाल लिखित रुपमै अपेक्षा नगरेको जानकारी पाएपछि अचम्भित भएका उपस्थित एक व्यक्तिले बताए ।
स्थानीय महिलाहरु आफै अग्रसर भएर दिएको जानकारीले अनुसन्धान सहज मोडमा पुगेको देखिएको छ ।
एक दर्जन प्रहरीको जागिर खतरामा
निर्मला हत्याकाण्डको प्रमाण सुनियोजित तरिकाले नष्ट गरिएका प्रमाण उच्चस्तरीय समितिले संकलन गरेको छ । समिति स्रोतका अनुसार शव पाइएको स्थलबाटै प्रमाण नष्ट गर्न सुरु गरिएको पाइएको छ । घटनास्थलको सुरक्षामा जानीजानी लापरवाही गरिएको पनि बताइएको छ । पोष्टमार्टमपछि केन्द्रीय प्रयोगशालामा भिसेरा आदि पठाउँदा पनि लापरवाही भएको समिति स्रोतको भनाई छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा हत्यारा किटान भने नसक्ने देखिएको छ । समितिका संयोजक सहसचिव मैनालीका अनुसार अनुसन्धानको काम कानुन अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय गठन गरेको अनुसन्धान टोलीले नै गर्ने हुनाले हत्यारा किटान पनि सोही टोलीले गर्ने बताए । उनले अनुसन्धानमा हेलचेक्र्याई गर्ने, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था पैदा गर्ने प्रहरीकर्मीलाई कारबाहीको सिफारिस भने उच्चस्तरीय समितिले नै गर्ने बताए ।
उच्चस्तरीय स्रोतका अनुसार कम्तीमा एक दर्जन प्रहरीकर्मी कारबाहीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । कारबाहीमा एसपी डिल्लीराज विष्टसहित सीआइबी डिएसपी अंगुर जिसी पनि पर्ने आकलन गरिएको छ ।
दिलिप छुट्ने संकेत
मानसिक अवस्था जाँच्न भनी काठमाडौं लगिएका दिलिप विष्टलाई महेन्द्रनगर फिर्ता ल्याइएको छ । उनलाई अदालतको आगामी पेशीबाट रिहा गर्न प्रहरी तयार रहेको संकेत आफूले पाएको दिलिपका दाजु खडकसिंह विष्टले बताए ।
मानसिक अवस्था जाँच्न भनी काठमाडौं लगिएका विष्टका बारे विशेषज्ञहरुले ठोस राय दिन नसकिने बताएपछि उनलाई फिर्ता ल्याइएको छ । मानसिक अवस्था बारे एकिनसाथ भन्न लामो समय अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले घरपरिवार, छरछिमेकको बयानलाई आधार मान्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएको बताइएको छ । एसपी विष्टका पालामा विष्टलाई यातना दिइएको र त्यो लुकाउन उनलाई काठमाडौं लगिएको परिवारजनको आरोप छ ।
परिवारजनको आरोपपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार शिक्षण अस्पतालमैं विष्टलाई यातना दिए नदिएको हेरेको बताइएको छ । प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अंगुर जिसीको यो साजिस !
सीआएबीको टोलीका प्रमुख डिएसपी अंगुर जोशीले निर्मला हत्याकाण्डका प्रमाण मेट्न भूमिका गरेको थप तथ्य फेला परेको छ । शव पाइएको स्थलमैं घटनाको केही दिनपछि उनले दैनिक मानसखण्डलाई उनले पानीका कारण अनुसन्धान कुकुर प्रयोग हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । तर, निर्मलाका कापी र किताब सुख्खा अवस्थामा भेटिएका थिए । जानकारहरुका अनुसार सुख्खा भेटिएका ती सामग्री सुँघाएको भए कुकुरले हत्यारा पत्ता लगाउन सक्थ्यो । जीसी र सीआइबीलाई यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि तथ्य लुकाएर कुकर प्रयोग नगरिएको बारे आइजीपी खनाललाई समेत जानकारी भइसकेको छ ।
सीआइबी टोलीका प्रमुख अंगुर जिसीले एसपी विष्टलाई प्रमाण नष्ट गर्ने काममा सहयोग गरेको यो प्रमाण महत्वपूर्ण भएको ठानिएको छ ।
अब के गर्छन् आइजीपीले ?
आइजीपी खनाल घटना सम्बन्धमा जानकार भएर फर्केका छन् । अब उनले आफूलाई प्राप्त जानकारीका आधारमा विशेष टोली बनाएर अनुसन्धान गर्ने सम्भावना रहेको छ ।